Author: Yojas Bataur
Ciidamda Booliska iyo Asluubta Qod. Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda; x. Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka. Qofna lama fara-gelin karo qoraalladiisa gaarka ah, waraaqihiisa somlailand ama xidhiidhkiisa isgaadhsiineed, marka laga reebo xaaladda uu xeerku baneeyo baadhitaankooda, daba-galkooda, ama dhegaysigooda iyada oo ay markaana waajib tahay in la helo amar garsoore oo sababaysan.
Xubnaha Golaha Guurtida waxay yeelanayaan mushahar iyo gunno xeer qeexo. Waxaa Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada magacaabi kara ama xilka ka qaadi kara Madaxweynaha; waxaana magacaabiddooda la hor dhigayaa Golaha Wakiilada oo ay fadhigaas joogaan kala badh iyo hal xubnood Quorumoo ku oggolaan kara ama ku diidi kara cod hal dheeri ah Simple Majority oo gacan taag ah. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada Qod. Ciidamda Booliska iyo Jamyuuriyadda.
Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday. Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya somalilamd kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa isagana dhaarinaya Madaxweynaha.
Tirada Guddida iyo Muddada Xilka. Awoodda iyo karaamada Qaranimada waxa leh shacbiga; wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada Qod. Xilka xeer-dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan Baarlamaanka. Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos dastuueka isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan.
Mashruuc-sharci waxa uu xeer ku noqonayaa ansixinta Golaha Wakiilada waxaanu dhaqan gelayaa ka dib marka uu Madaxweynuhu saxeexo sida ku cad Qod. Diinta Qaranka Somaliland waa Diinta lslaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reebban faafinta diin aan ahayn Diinta lslaamka. Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada Qod. Xuduudda Wax-ka-Bedelka iyo Kaabidda Dastuurka. Muddada xilka Golaha Wakiiladu waa 5 shan sano oo ka bilaabmaya maalinta Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqdo go’aamada doorashada.
Waxbarashadu waa mid u danaynaysa dadweynaha, kuna habaysan waayaha iyo deegaanka gaar ahaaneed ee bulshada Somaliland. Other Political parties Passport. Golaha cusub waxaa furaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo dhaarinaya xubnaha. Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah.
Haddii ay xubin ka mid ah Golaha Guurtida ama Golaha Wakiillada ay ku timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad waxaa soo buuxinaysa beeshii uu ka tirsanaa inta laga gaadhayo nidaamka axsaabta ee doorashada. Dhismaha Garsoorka Qod. Maxkamadda Sare Qod. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida.
Dawladda waxa xil ka saaran yahay horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka iyo xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah.
Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland. Laba caleemood oo doog ah ayaa hoosta iyo hareeraha kaga wareegsan Galaydhka; labada caleemood baarkooda inta u dhaxaysa waxa ku qoran “Bisinka” oo Far Carabi ah.
Dawladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayo-qabka deegaanka oo asaas u ah caafimaadka bulshadda iyo dhawrista khayraadka dalka.
Mas’uuliyadda dembi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay oo keliya. Guddida Culimada iyo Waajibaadka Guddida Qod. Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida Qod. Qaybta 4aad Xubinta 1aad Waaxda Garsoorka Qod. Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin, isla markaa barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka ah waa waajib Qaran.
Afafka kale waxa loo adeegsan karaa wixii looga maarmi waayo.
Xubinta 4aad Qod. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale. Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya. Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda.